लायन्स क्लव इन्टरनेशनल डाइरेक्टरमा उम्मेदवार बनेका खगेन्द्र सिटौलाका कुरा पनि सुन्ने कि ? | DNFMEDIA
लायन्स क्लव इन्टरनेशनल डाइरेक्टरमा उम्मेदवार बनेका खगेन्द्र सिटौलाका कुरा पनि सुन्ने कि ?
काठमाडौं । जेठ २२ गते हुन गइरहेको लायन्स क्लबको भच्र्युअल मल्टिपल डिष्ट्रिक ३२५ को कन्भेन्सनमा इन्टरनेसल डाइरेक्टर इन्डोर्सिका प्रत्यासी खगेन्द्र सिटौलाको जित सुनिश्चित बन्दै गइरहेको छ । उनको सम्भावना बलियो बन्दै गएपछि उनीसँगै उम्मेदवार बनेकाहरु अत्तालिएका छन् ।
खगेन्द्रको लोकप्रियताको कदर गर्दै सबैजसो मतदाताले मतदान गर्ने जनाएपछि उनी भने ढुक्क भएका छन् । सिटौला नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लायन्समार्फत लामो योगदान पुर्याउने व्यक्तिमध्येका एक हुन् । उनको स्वभाव, लगनशीलता र असल संस्कारलाई मतदाताले पनि पत्याएका छन् । नेतृत्वमा उनीजस्तो मान्छे आउनुपर्छ भनेर आवाज उठिरहँदा सिटौला आशावादी बनेका छन् । समाजमा परेको अप्ठेरो साह्रो गाह्रो, दैवी प्रकोप, स्वास्थ संकटजस्ता विषम परिस्थितिमा मन बचन र कर्मले निस्ठापूर्वक समर्पित हुने तिनै व्यक्तिको नाम हो खगेन्द्र सिटौला ।
जित सुनिश्चित बन्दै जाँदा खगेन्द्र सिटौला जिताउ अभियान÷चुनावका संयोजक अनन्त प्रसाद भेटुवालले खगेन्द्र सिटौलाको जित नै समग्र नेपाली लायन्सहरुको जित हुने बताएका छन् । उनले सबै लायन्सको भावनाको कदर गर्दै आगामी दिनमा कदम चाल्ने प्रष्ट पारिसकेका छन् । लायन्सलाई थप आधुनिक र जनतामैत्री बनाउने उनको प्रमुख उद्येश्य रहेको छ । अनन्तले भने ‘अनुभवीको विचार र नयाँको जोश र जाँगरलाई समेटेर जानु नै अहिलेको आवश्यकता हो, जुन क्षमता सिटौलामा सजिलै देख्न सकिन्छ ।’
खगेन्द्र सिटौलाको सामाजिक योगदान, नेतृत्व क्षमता र सन्तुलित व्यवहार नै उनको जितको प्रमुख आधार रहेको खगेन्द्र सिटौलाको जिताउ अभियानका मिडिया संयोजक राजन श्रेष्ठले जनाए । सिटौला धेरै लायन्सकर्मीहरुको लागि प्रेरणाको श्रोत हुन्, उनले आफैं पनि धेरै लायन्स उत्पादन गरेका छन् । सिटौलाले निर्वाचनका बेलामा मात्र ठूला भाषण गर्ने र निर्वाचित भएपछि त्यस अनुसार काम नगर्ने परिपार्टी रहेको बताउँदै आफू त्यो परम्परालाई तोड्न पनि सक्रिय भएको बताएका छन् ।
Previous: लायन्स क्लब अन्तराष्ट्रिय डिष्ट्रिक्ट ३२५ बि १ द्वारा गोरखामा सहयोग
Next: राप्रपा नेपाल र जनताको पार्टी नेपालबीच एकता हुने